Patent yeApple Watch yaizobatsira varwere vaParkinson | Ndinobva mac
Patent yeApple Watch yaizobatsira varwere vaParkinson
Patent chimwe chinhu chisingamboregi kutishamisa uye kana iri Apple tinowana ese marudzi emvumo. Mune ino kesi, patent nyowani yakabvumidzwa yeApple inowedzera chingave budiriro kune vashandisi vane chirwere chePasinson, iko kushanda kungabvumidza kuteedzera zviratidzo zvekudedera kubatsira ivo vaviri iye chiremba uye murwere dzora zviratidzo.
Mumiririri wechiratidziro unoratidza mushandisi newachi uye nekutenda kune ma sensors anowedzerwa mumuchina wechiuno ivo vaigona unganidza uye chengeta zvimwe zve pre uye post zviratidzo pamberi peichi kurwisa kwekudengenyeka uye dyskinesia inokonzeresa chirwere chePasinson muvarwere.
Zvine musoro, patent iyi haizodziviriri chirwere kubva mukufambira mberi kana kugadziriswa, asi zviri pachena kuti mirau mitsva yekurapa inogona kuwanikwa nekuda kwekugara uchiongorora chirwere muvarwere. varwere vane Apple Watch. Pese patinoona patent inogona kuunza kuvandudzwa kwenyaya dzehutano tinofara kwazvo, asi zvinosuwisa kuti isu tatoziva zvinoitika nemapatendi uye ndezvekuti havazi vese vanopedzisira vaitwa mumidziyo kanenge munguva pfupi.
Mune ino kesi, kugara uchiongororwa uko Apple smart wachi inogona kupa kutenda kune iyi patent kunogona kubatsira vanachiremba nevarwere vane chirwere chisingaperi ichi, kunyangwe chiri chokwadi kuti kesi yega yega yakasiyana. idzi data dzinogona kubatsira zvakanyanya. Ngatitarisirei kuti rimwe zuva mhando iyi yakakosha patent muhutano hwevanhu ichaitwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Patent yeApple Watch yaizobatsira varwere vaParkinson
HomeKit inosara kumashure paIkea's smart blinds
Yakazara Hondo: Kudonha kweSamurai kugadzirisa kune macOS Catalina